ठूला मन्त्रिपरिषद्का छोटा कार्यकाल - Naya Patrika
ठूला मन्त्रिपरिषद्का छोटा कार्यकाल
०५२ : ५२ सदस्यीय
०५२ मा देउवा नेतृत्वको सरकार एक वर्ष ६ महिना मात्र चल्न सक्यो । राप्रपासँग मिलेर बनेको सो सरकार १६ महिनाभन्दा लामो समय चल्न सकेन । पार्टीभित्रैको अन्तर्घातले देउवाले ६ पटकसम्म पुनर्गठन गर्दै ५२ मन्त्री सहभागी ठूलो सरकार बनाएका थिए ।
०५४ : ४७ सदस्यीय
०५४ मा कांग्रेसको सहयोगमा राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापाले ४७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । तर, यो सरकार त झन् ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री बनाइएका थापा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाटै प्रतिस्थापित हुन पुगे । कुनै ठूलो राजनीतिक कारण र निहुँभन्दा पनि सत्ता स्वार्थकै कारण ६ महिनामै सरकार गिर्न पुगेको थियो ।
०५८ : ४१ सदस्यीय
शेरबहादुर देउवा ०५८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । तर, ४१ सदस्यीय देउवा सरकार १४ महिना मात्र चल्न सक्यो । माओवादीविरुद्ध सेना परिचालनको विषयमा विवाद भएपछि कांग्रेसले नै देउवालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही ग¥यो । संसद् विघटन गरेर देउवाले निर्वाचन घोषणा गरे । तर, निर्वाचन गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजाबाट अपदस्थ गरिए ।
०६६ : ४३ सदस्यीय
०६६ मा एमाले नेता माधव नेपाल कांग्रेससहितको दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारमा मन्त्रीको संख्या ४३ सदस्यीय थियो । तर, प्रधानमन्त्री बनेको १३ महिनामा राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री चुनिन समय लागेकाले ७ महिना काम चलाउका रूपमा काम गरे । प्रधानमन्त्रीका लागि १८औँ पटकसम्म निर्वाचन भएर एमालेकै नेता झलनाथ खनाल बल्ल प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए ।
०६८ : ४९ सदस्यीय
०६८ मा माओवादी केन्द्रका डा. बाबुराम भट्टराईको ४९ सदस्यीय सरकार बन्यो । तर, यो १८ महिने कार्यकालमा पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ।
०७२ : ४० सदस्यीय
१५ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि माओवादीसहितका दललाई समेटेर ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । तर, उनको सरकार पनि १० महिनाभन्दा लामो समय टिक्न सकेन ।
०७३ : ५० सदस्यीय
२० साउन ०७३ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर, उनको ५० सदस्यीय मन्त्री भएको सरकार पनि नौ महिनाभन्दा लामो समय टिकेन । प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि प्रचण्डले राजीनामा दिए ।
०७४ : ५४ सदस्यीय
प्रचण्डले एक चरणको निर्वाचन गराएपछि देउवाले प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा निर्वाचन गराएका छन् । प्रदेश नं. २ मा २ असोजमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनका वेला भए पनि देउवाले पटकपटक गरी ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । जुन नेपालका राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो । जसमा २९ मन्त्री र २४ राज्यमन्त्री छन् ।
आगामी १० र २१ मंसिरमा सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । समयमै निर्वाचन भएर सरकार गठन हुन सके अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीयुक्त सरकारको कार्यकाल पनि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने भएको छ ।
चार मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद् ५४ सदस्यीय
५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सोमबार चार सदस्य थपिएपछि नेपालको इतिहासमै देउवा नेतृत्वको सरकारको आकार सबैभन्दा ठूलो बन्न पुगेको छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट विक्रम पाण्डे वन, दीपक बोहरा विज्ञान तथा प्रविधि र सुनीलबहादुर थापा उद्योगमन्त्री भएका हुन् । शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीलाई शपथ गराएकी हुन् । त्यस्तै, रेशम लामाले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष उद्योग राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।
तर, अझै अपूर्ण सरकार
५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भए पनि अझै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको छ । यो मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री थप गरिए मन्त्रिपरिषद्को आकार अझै बढ्नेछ ।